ICheetah Digital: Ungawabandakanya Kanjani Amakhasimende Emnothweni WeTrust | Martech Zone
Abathengi bakhe udonga lokuzivikela kubalingisi ababi, futhi baphakamise amazinga abo emikhakheni abachitha imali yabo ngayo.
Abathengi bafuna ukuthenga kumikhiqizo engakhombisi nje kuphela umthwalo wezenhlalo, kepha abalalela futhi, bacele imvume, futhi bathathe ubumfihlo babo ngokungathi sína. Lokhu yilokho okubizwa nge- trust umnotho, futhi kuyinto yonke imikhiqizo okufanele ibe nayo ngaphambili kumasu abo.
Ngabantu abadalulwe ngaphezu kwemiyalezo yezokumaketha engaphezu kuka-5,000 usuku ngalunye, ama-brand kufanele alwele ukudala lowo mzuzu womlingo odonsela ukunakwa futhi osize ukuzibandakanya okuqondile nabathengi. Kepha imikhiqizo yokuthengisa inganqamula kanjani ukumaketha umsindo ngaphandle kokuba creepy?
Impendulo ukunikela ngokushintshaniswa kwenani elibonakalayo. I- ukushintshaniswa kwenani kulapho abathengisi banikeza abathengi okuthile ngokubuyisela idatha yabo yokunaka, yokuzibandakanya, neyezintandokazi. Futhi akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi kube umklomelo wesaphulelo noma obomvu; okuqukethwe okukhethekile, i-kudos yomphakathi, izincomo ezenziwe zaba ngezakho, namaphoyinti okuthembeka nakho kungaba yisisusa sokuqoqwa kokuzikhethela nokuzibika ngokwakho, idatha yeqembu elingu-zero.
Imikhiqizo kufanele idele ukuthenga i-dodgy, idatha yomuntu wesithathu, nokuqola abathengi, futhi esikhundleni salokho ilwele ubudlelwane obunokwethembeka, obuqondile, nobubaluleke kakhulu kubathengi. Lokhu akugcini ngokunikeza ama-brand onqenqemeni, kepha ukuhlinzeka ngokushintshaniswa kwenani ngokubuyisela idatha yabathengi, ukuzibandakanya, nokwethembeka kunika amandla imikhiqizo ukuxhumana ngqo nabathengi nokushayela izinhlelo ezenziwe zaba ngezakho.
Noma imuphi umthengisi omuhle uyazi ukuvelela eminyakeni yomthengi kumayelana nokwakha okwenziwayo komkhiqizo okukhuluma ngqo ezidingweni zamakhasimende. Kepha ngenkathi bethokozela ubulula nokubaluleka okulethwa yilezi zinhlangano ezenziwe ngezifiso, abathengi bayashesha nokugodla imininingwane yabo futhi bafune ubumfihlo obandisiwe ku-inthanethi. Le nkinga iba nodaka ngokwengeziwe ngemuva kwamahlazo amakhulu wokuthembela kanye nokwephulwa kwedatha okudala imithetho nemitheshwana yokuvikela idatha eqinile. Kepha imininingwane yomuntu uqobo nokumaketha okubhekiswe kuye kuyahambisana.
Ngakho-ke umakethi wenzani? Le yi Indida yobumfihlo. Abathengi ngasikhathi sinye balindela ubumfihlo kanye nokuhlangenwe nakho komkhiqizo okwenzelwe wena. Kungenzeka ukuletha kukho kokubili? Impendulo emfushane ithi Yebo. Ngendlela entsha yokuthola imininingwane yabathengi, ukuzibophezela ekuvikelekeni kuwo wonke amazinga enhlangano, kanye nokuqapha, isimo sengqondo sokusebenza ngokuphathelene nokulawulwa kwezinhlekelele, imikhiqizo ingahlangabezana nokulindeleka kwamakhasimende abo okuvela obala nokulawula, ngenkathi ibathokozisa ngokuhlangenwe nakho komuntu siqu okunikwa amandla ngemininingwane.
ICheetah Digital ingumhlinzeki wesixazululo sokubandakanya amakhasimende wesiphambano somthengisi wanamuhla. ICheetah iyaqonda ukuthi izinhlobo zanamuhla zidinga izixazululo zokuhlinzeka ukuphepha, amandla wesiteshi esiphambanweni, imishini yokushintshanisa inani, kanye nokuhlangenwe nakho komuntu uqobo okulindelwe amakhasimende.
Ngasekuqaleni konyaka, iCheetah Digital ibikhona waziwa ngenkundla yayo yokwethembeka futhi usebenze namaVans. Ixhaswe yi-Cheetah Loyalty, i-Vans idale i-Vans Family, uhlelo lokusebenzisana nolunembile olwenzelwe ukuqaphela, ukuklomelisa, nokugubha abalandeli ngokuthi bangobani nokuthi bathanda ukwenzani. Uhlelo lusiza izingxoxo ezimbili nabathengi.
Amalungu athola ukufinyelela emincintiswaneni kanye nokuhlangenwe nakho okukhethekile, izicathulo ezenziwe ngokwezifiso nezinsiza, nokubukwa kuqala kokukhishwa komkhiqizo okuzayo. Ngokwengeziwe, amalungu athola amaphuzu ngokuthenga nokuzibandakanya nomkhiqizo. Esikhathini esingaphansi kweminyaka emibili, iVans ihehe amalungu angaphezu kwezigidi eziyi-10 kwiVans Family e-United States kanti amalungu ohlelo asebenzisa amaphesenti angama-60 ngaphezu kwalabo abangewona amalungu.
ICheetah Digital Customer Engagement Suite idala izikhathi zenani eliphakathi kwamakhasimende nemikhiqizo. Ihlanganisa ukujula nobubanzi beplatifomu yedatha eqinile namandla wangempela wesikhathi sangempela, wokusebenza kwesiteshi, kusisombululo esisodwa, esihlangene. I-Customer Engagement Suite ifaka phakathi:
Okuhlangenwe nakho kwe-Cheetah - Iletha okuhlangenwe nakho kokutholwa kwamakhasimende edijithali okunika amandla imikhiqizo ukuqoqa idatha yokuqala neyesithathu, futhi kuvikeleke izimvume ezibalulekile ezidingekayo zokwenza imikhankaso yezikhangiso ehambisanayo futhi ephumelelayo.
Imilayezo yeCheetah - Inika amandla abakhangisi ukuthi bakhe futhi bahambise imikhankaso efanele, eyenziwe ngezifiso yezokukhangisa kuzo zonke iziteshi nezindawo zokuthinta.
Ukwethembeka Kwengulule - Inikeza abathengisi amathuluzi okudala nokuletha izinhlelo ezihlukile zokuthembeka ezikhiqiza ukuxhumana okungokomzwelo phakathi kwemikhiqizo namakhasimende abo.
Ipulatifomu Yedatha Yokubandakanya Ingulule - Isendlalelo sedatha eyisisekelo kanye nenjini yokwenza kube ngokwakho eyenza abathengisi bakwazi ukushayela idatha kusuka ekuqondeni okuhlakaniphile ukuya esenzweni ngejubane nangesilinganiso.
Ngamakhasimende angama-3,000 1,300, abasebenzi abangu-13 1, nokuba khona emazweni ayi-XNUMX, iCheetah Digital isiza abathengisi ukuthumela imiyalezo engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezi-XNUMX usuku ngalunye.
Khuluma Nesazi Sedijithali
Tags: ingulule digitalIngxenyekazi yedatha yokubandakanya ingululeokuhlangenwe nakho kwengululeukwethembeka kwengululeImilayezo ye-cheetahukutholwa kwamakhasimendeIdathaimeyili Marketingumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespizinhlelo zokwethembekaukuzenzelaubumfihloIndida yobumfihlotrust umnothoukushintshaniswa kwenani
Ama-plugins amahle kakhulu we-WordPress weSayithi Lakho Lebhizinisi